Salesforce CEO ọkwa atụmatụ maka blockchain ngwaahịa - Blockchain News
Salesforce CEO ọkwa atụmatụ maka blockchain ngwaahịa
Salesforce na-arụ ọrụ na a ngwaahịa dabeere blockchain technology, ígwé ojii Mgbakọ ụlọ ọrụ CEO kpugheere.
Marc Benioff, onye tọrọ ntọala ụlọ ọrụ na 1999, kwuru “M na-eche ọtụtụ ihe banyere ihe bụ Salesforce atụmatụ gburugburu blockchain, na ihe na-Salesforce si azum gburugburu cryptocurrencies na otú anyị si gbasa ndị a niile ihe,” ọ si.
Mgbe na-anaghị enye nkọwa na-abịa-ngwaahịa, Benioff kwuru na ọ na-atụ anya “nwere a blockchain na cryptocurrency ngwọta maka Salesforce na ihe niile nke ndị ahịa anyị” tupu Dreamforce – a ogbako na ụlọ ọrụ ga-nọrọ n'ụlọ na San Francisco na Sept. 25.
Salesforce na-kasị mma-mara maka ya ígwé ojii Mgbakọ software maka ahịa mmekọrịta management. The ụlọ ọrụ mere $10.5 ijeri na revenue n'afọ agwụcha Jan. 31.
Jikọọ Salesforce onyeisi oche na CEO Marc Benioff na ngalaba-nchoputa Parker Harris maka a Fireside Chat on Wednesday n'ehihie. Da gị ajụjụ ma na-aza anya si founders nke salesforce.com
Mmepe mara ọkwa mbụ hardcore nke blockchain Dogecoin
Dị ka a na steeti ...
Coinbase mere 43% nke ya 2017 revenue n'oge December
The dijitalụ ego ...
Paxos kaadị ụlọ ọrụ ...
Previous Post:Mexico na-emepe emepe a blockchain dabeere bidding usoro
Next Post:Germany No. 2 ngwaahịa mgbanwe atụmatụ maka iwebata nke kaadị Trading App
Ka 28, 2018 na 1:52 PM